Dagaalka Bisada oo ka dhex bilaawday Sonakshi iyo Parineeti ma ahan arin wanaagsan balse Ajay ayaa xal ku maqan! – Filimside.net
Dagaalka Bisada oo ka dhex bilaawday Sonakshi iyo Parineeti ma ahan arin wanaagsan balse Ajay ayaa xal ku maqan!
Sonakshi Sinha iyo Parineeti Chopra waxay ahaayeen labo saaxiibo ah oo xafladaha kusoo bandhigaan wanaaga ka dhaxeeyo sidoo kalana baraha bulshada ku kaftamaan dhawaana waxay wada saxiixdeen filimka weyn Bhuj ee Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Rana Dagubatti iyo jilaayaal kale ku jiraan.
Sonakshi Sinha iyo Parieenti Chopra sidoo kale waxay baraha bulshada shaaca kaga qaadeen inay xili hore bilaabeen duubista filimka Bhuj sidoo kalena ku faraxsan yihiin mashruucan weyn qayb ka noqdaan laakiin halmar ayaa labadan gabdhood dagaalka bisada ka dhex qarxay!
Parineeti ayaa ka carootay markii ay ogaatay in Sonakshi Sinha saxaafada qaarkood iyo qof walbo oo duubista goobta filimka Bhuj ku sugan inay u sheegeyso in filimkan iyada atirisho kowaad ka tahay halka markii hore ay wada saxiixanayeen loo wada sheegay inay labo door isku mid ah filimka ku leeyihiin.
Parineeti waxay dhibsatay faanka aan xasilneyn ee Sonakshi Sinha waxayna u dacwootay kooxda filimka Bhuj una sheegtay inay dhibsatay in Sonakshi qof walbo u sheegeyso filimkan atirisho kowaad ka tahay balankana sidaas ahay markii hore ay mashruucan wada saxiixdeen.
Sonakshi Sinha halkii ay qaladkeeda qaadan laheyd waxay go’aansatay inay xiriirka u jarto Parineeti Chopra kadibna labadan atirisho hadalka wey kala goosteen mana aysan jeclaanin kooxda filimka Bhuj hab dhaqanka labadan gabdhood shaqada ka dhaxeyso in xifaaltankooda gaarsiiyo inay kala aamusaan.
Ajay Devgn oo ka mid ah soo sarayaasha filimka Bhuj ayaa la sugaa isaga ayaa dhawaan kusoo biirayo duubista mashruucan waxaana lagu kalsoon yahay in Parineeti iyo Sonakshi dib u heshiisiin doono kana dhaadhicin doono in wax walbo meel iska dhigaan oo ay shaqada hortaalo waqti badan galiyaan.
Waxaa Aqrisay 701